Ukususela ngo-1908 ukuya ku-1988
Inkqubo yebhokisi yokubeka ibhokisi ilawulwa ngokwemvelo, loo nto iyavunyelwana ngayo yi-pundits kunye neengcali emhlabeni wonke.
Ukuphosa ukungahambi kakuhle, kungakhankanyi ukukhwabanisa, kwaye isigaba sisetyenziselwa ukuphikisana kwikhowudi yemidlalo yezemidlalo. Nazi imimiselo embalwa (ngokulandelelana kwexesha) kwimiba ethile yokwenene kwiminyaka edlulileyo kwi-Olympic Boxing history:
E-Australia uReginald "Snowy" Baker, owawunqobile iSiliva ekumgangatho ophakathi, wayeyena kuphela umbhokisi waseBrithani onokuwina umlindi.
UB Baker, ekholelwa ukuba umpempe wayengakhethi, wabhikisha ukulahlekelwa kwakhe ekupheleni kukaJohn Douglas. Iidiliya zaso? Ngaphandle. Umpempe wayengunina kaDouglas!
Izigqibo eziphikisanayo zikhokelela ekugqibeleni phakathi kwababukeli bebukele iimfazwe. Enye enye ingqungquthela yaza emva kwesigqibo esiphikisanayo sasihamba nxamnye ne-American flyweight Hyman Miller kwinqanaba lokuqala. Iqela lebhola le-US libheke ukuhoxiswa kwiMidlalo kodwa lathethwa nguDouglas MacArthur, owayengumongameli weKomiti yeOlimpiki yase-US.
3. eBerlin, ngo-1936
U-Thomas Hamilton-Brown waseMzantsi Afrika onqabileyo, emva kokulahlekelwa isigqibo esahlukileyo sokuqala, wadla ukutya. Akukho nto enkulu, akunjalo? Aphosakeleyo! Kwafunyaniswa ukuba omnye wabagwebi uye waphenduka amanqaku akhe kwaye uBrown wayengumdlali oyinqola kodwa akazange akwazi ukulinganisela ukuhamba kwakhe okulandelayo kwaye akazange avumelekile!
4. Los Angeles, ngo-1984
Kwiimidlalo zika-1984, uEvander Holyfield wayemelela iUnited States kwisiqabana esilula.
Kwinqanaba lesibini lomdlalo wokugqibela kunye noKevin Barry, u-Holyfield akafanelekanga. Umpempe uGligorije Novicic wabiza "ukuphuka", okuyalela ukuba abalandeli bayeke ukubetha. U-Holyfield, ngokusobala, akazange avelele umnxeba kwaye waphonsa isikhonkco esaye sawa uBarry kwisitya. Xa uBarry engakwazanga ukuqhubeka, uSherfield wayengafanelekanga.
U-Holyfield odidekileyo wanikezelwa ngendondo yebhedu.
Kubi kangakanani esi sigqibo? Okubi kangangokuthi umpempe kamva waxolisa ngenxa yokungabi nesikhundla xa wenza "ikhefu" umnxeba. Kulungile ukuba i-Gold medalist u-Anton Josipovic waseYugoslavia ithathe i-Holyfield ibe yintloko yesikhulumi ukuba ijoyine naye ngexesha lomdumo.
URoy Jones Jr. wayengumbhokisi wamatye ophumelelayo, ebhala irekhodi le-121-13. NgeeMidlalo zika-1988, wayemelela iUnited States kwisiqendu sokukhanya phakathi. UJonas wawunqoba yonke into ehamba phambili ukuze afikelele ekupheleni. Okokugqibela kwakungeyona nto eyahlukileyo njengoko uJonas washiya ummelwane wakhe waseMzantsi Korea iPark Si-Hun 86-32. Ngelishwa, abagwebi babecinezelwa, baxinywe okanye batyhutyha ukulwa nomlobi wendawo kwaye banikeze iPaki isinqumo esingenakuthenjwa esise-3- 2. Ijaji elinye lavuma ukuba isigqibo sasiyimpazamo kwaye bonke abagwebi abathathu bapheliswa.
Kubi kangakanani esi sigqibo? Ipaki kuthiwa yathokoza uYones emva kokugqithisa kwaye yavuma ukuba isigqibo esilungile. Isigqibo sasinakele ngokwaneleyo ukuba, naphezu kokuwina kuphela iMedal Medal, uJones wanikezwa iVal Barker Trophy njengebhokisi lomdlalo obalaseleyo kunye nobungcali.
IOC - nangona uphando kunye nokugqiba ukuba abathathu abagwebi bahlanjululwa kwaye badliwa ngamagosa aseKorea - bavumela isigqibo sokuma.
Buyela kwibhokisi yeOlimpiki
I-Québécois isiFrentshi - Iimpawu ezigqwesileyo
Iphulo le-Napoleon yaseYiputa
Isikhokelo soKhuseleko lweHlabathi yeHomemark